Al-Qaadi: “Ma jiro sharci u ogolaanaya in dowladda federaalka inay soo farageliso maamul gobol” – Hornafrik Media Network
Al-Qaadi: “Ma jiro sharci u ogolaanaya in dowladda federaalka inay soo farageliso maamul gobol”
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq Al-qaadi ayaa ka hadlay ciidamo ay dowladda Soomaaliya geysay degmooyin ka tirsan gobolkaas.
Al-Qaadi oo u waramay Idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in ciidamo afduuban todobaadkii hore ay dowladdu ka dejisay degmada Baardheere, balse markii ay ka dagaalameen arinka ciidankaas lagu geeyey Baardheere loo qaaday dhanka degmada Luuq ee isla gobolka Gedo.
Guddoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in maanta ciidan kale oo tiro ahaan gaaraya 70 askari ay dowladdu ka dejisay degmada Luuq oo ay horay ugu sugnaayeen ciidankii ka socday dowladda federaalka ee laga soo celiyey Baardheere.
Sheekh Maxamed Xuseen Al-qaadi ayaa ka digay in dagaal uu ka dhaco gobolkaas, isagoo sheegay in dhankooda aysan diyaar u aheyn dagaal aan aheyn kan Shabaab ay kula jiraan.
Sidoo kale waxa uu sheegay in arinka ciidamada lagu geynayo gobolkaas ay gadaal ka riixayaan laba nin oo ka tirsan Nabad sugidda Soomaaliya oo uu ku kala sheegay, Sakeriye iyo ina Kulone, isla markaana aysan madaxda dowladdu wax badan ka ogeyn falalka ay ragas ka wadaan gobolka, kuwaas oo uu ku tilmaamay kuwo dadka ka hor keenaya dowladda.
Dhinaca kale guddoomiye Al-qaadi ayaa sheegay in uusan jirin sharci u ogolaanaya dowladda federaalka inay soo magacaawdo maamul gobol, maadaama uu dalka ka jiro nidaam federaal ah, dowlad goboleedna ay hoos tagaan.
War-murtiyeed: Ahlu-Sunna oo mar kale DF ku eedeysay inay u afduubantahay doorashada Galmudug